mivarina tsingerina | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in Zava-poana . fandrosoana
Eto an-tany ny fahafatesan'ny zaza vao teraka voalohany, miezaka brainwash mitohy tsy misy dikany, izay tokony hitondra ny voajanahary, obydlyachivaniya ilaina ny atidoha sy ny manaraka fanovana ny olona toy ny taova biorobota. To, fa “bezmozglыe” ray aman-dreny dia tsy misalasala, mba hanalana sarona ny zanany simba amin'ny dieny mbola kely – dia manatitra voaomana mialoha-boky “fampianarana”. “Tsy misy zavatra tsy hanao: Fitaovana ny vokatra farany” – eto, fa ny mpanoratra hoe Satana ny boky.
Mba hanaisotra izay fahatakarana izay mitranga, ary ho very hevitra avy eo amin'ny fiainana tsingerina, taranaka vao misondrotra milaza angano toy izany izay tena sarotra ny mahatakatra ny fitsipiky ny asa ilaina eo amin'ny tontolo ivelany. angamba, angano toy izany dia tsy mifandray amin'ny fitaovana fiainana, satria olona iray maneho ny nofy tsy tanteraka, na ny mahazatra ny fandisoana vaovao. Tsy voailika, fa ny mpanoratra tantara fotsiny ireo tsy manana ny fo hilaza ny marina, na angamba dia mampidi-doza eo amin'ny fiainana, ary satria tsy misy fiainana.
Mba hampirisihana ny tsy nahatsiaro tena fandikana sy fahasosorana foana manaraka, podrostaet zavamananaina dia nifantoka tamin'ny fiheverana ny pananahana. Amin'ity tranga ity,, dia misakana ny fepetra ho an'ny fianarana sy liana hihaona amin'ny mahabe resaka. Izay taty aoriana dia mitarika ho amin'ny tsy ampoizina fanampiny ho an'ny fianakaviana sy ny firongatry ny mpanompo iray hafa ao amin'ny toe-javatra ny rafitra.
Raha ny mpanompo teorika dia tsy te hiankohoka ny toe-javatra ny rafitra – Avy eo dia iharan'ny mafy kokoa ny fitsaboana. Izany Fanahy izany no fandringanana na ny famongorana ny fitsipika, mamela ny mpanompo fanjakana foana stabilnst. Izany no ankapobeny ny KGB, CRU, FBR (na ny sampam-pitsikilovana manokana, fivavahana, mihidy fiaraha-monina sy ny baiko) rehetra ny fitaovam-piadiana ara-teknika. Raha hatrany am-piandohana ny fiainana ny olona no miezaka ho an'ny sasany idealy (ao anatin'izany dia misy fitsipika ny hatsaran-tarehy) – zavatra akaiky kokoa olon-dehibe izy ireo manomboka hofoanany amin'ny fanampian'ny psychotronic fitaovam-piadiana sy ny fahatsiarovana fomba erasure. Ny tompon'ny fanjakana sy ny vondrona lehibe noheverina, fa ireo ihany no hany tena fahalalana 'izao tontolo izao, ary matetika “nandringa fitaovana” ny system. Indraindray izy ireo ho resy lahatra, fa “Gears” ny mpitondra ny hevitra tsara – Avy eo dia iharan'ny fandravana. Ny hevitra ilaina nangalarina eo amin'ny manam-pahefana “upstarts”. Ary avy amin'ny taova biolojika hanaisotra, na hanampy azy tao an-trano nifindra ho an'ny marary saina. fitsipika, rehetra States mba misy amin'ny lany ny nangalarina hevitra tsara. fa, ankapobeny, dia maneho ny tsiambaratelom-panjakana. Mazava ho azy fa, amin 'izany ny hatsiaka tsy afaka tsy hiraharaha ny fiaraha-monina isan-karazany mihidy, fividianana “fahalalana miafina”, ny alalan 'izany dia afaka mamorona sy ny andrim-panjakana. Ny vaovao ilaina rehetra, voangony mihidy fiaraha-monina, maneho “fahalalana miafina”, fa ny fanangonan-karena izay tsy saro-kenatra izy ireo “manitsaka ny faty”.
Raha ny fahiratan-tsaina sy ny asa “zava-miafina fikambanana” tsy afaka miatrika ny asa nanendrena azy ireo – ny foto-kevitr 'i Satana sy ny ekipa tonga vetaveta. Afa-tsy toe-javatra tsy fahita firy, tsy hanatratra ny tanjona. Modern, rehefa asitrika ao anaty be dia be ny fahasorenana, “obolvanivaemomu Duraku” manomboka hamafa ny fahatsiarovana. Izany no mba hahazoana antoka, manana “Cannon vilona” Taty aoriana dia nisy ny faniriana hamaly faty.
ankizy kely, izay tsy maintsy efa ho liana amin'ny ankizilahy na ankizivavy, reny hoe: “mianatra, mandray ny fanabeazana, ary “vehivavy misy” ho avy eo”, fa raha izany dia fotoana sarobidy “avy eo”, Ary ho toa ny andro no efa akaiky hitranga – dia misy ray, rahalahy, rahalahin-drainy na ny dadabeny, fanambarana: “Mety mihevitra ianao Tsy fantatro, fa izao mitranga “vehivavy misy” mandeha? Be ny olona! Raiso misy azy ireo sy hanan-janaka, hiaina!” hafahafa, fa aiza “vehivavy misy”? Raha ny fandehany, ny fitaka rehetra, fa “vehivavy misy” rehetra, -tsaina. fa idiotic, ny tsy rariny ianao? voatarika “lalao” zava-poana sasany “vehivavy misy”, ary rehefa tonga ny fotoana fanisana – dia, izany ary mandoa na inona na inona. dia toy izany no, olona, tsirairay, hiaina ny fiainana tsy mahasoa na iza na iza… Mahaliana, Ray aman-dreninao ve ny manaiky ny hamela ny ankizy ny hiaina tsy misy “vehivavy misy” ary raha tsy mieritreritra momba izany “vobshebnyh” fanantenana? angamba, valiny mazava: izay manaiky ny hiaro ny zanany amin'ny Satana Hell? Rehefa zazakely iray hafa dia heverina ho karazana tia miray hina.
Mety ho ny zokiny lahy havany aza izany rehetra izany noho ny fialonana, na angamba izy ireo no mihazakazaka mangina rafitra solosaina. Tsy voailika, fa ny fiainana manidina nony satria, ny ankizy tsy afaka mandà ny ray aman-dreniny, na ny ray aman-dreny tsy afaka hilaza amin'ny zanany kosa ny marina. Tsara homarihina, fa ny solontenan'ny ny vehivavy firaisana ara-nofo, ankapobeny, faly handray izany lalao. nefa, tokoa, Tokony hanoratra avy ny sazy ho tara: sazy ny farany fandroahana ny rafitra sy nametraka mampirisika ny tafahoatra tsy ara-potoana sy mahatsiaro mpikarakara sy ny executors, ary fotoana nilany azy io karazana no iharan'ny matin'ny hatsiaka. fahamarinana, manala ny “bezmozglыh Dur” zozoro dia tsy mendrika, amin'ny toe-javatra tafahoatra dia mahasoa toy ny fitaovana biolojika.
toa, fa ao amin'ny tontolo toy izany ny Fikambanana minia ampoizina mihitsy ny ankizy teraka ihany, izay mankahala azy ireo, ary maniry ny zanany miavaka ratsy sy ny fijaliana. Ataovy ao an-tsaina, fa tandindonin-doza ny mponina tontolo tsy maintsy mahatsapa ny endrika samihafa “demonia hery miasa mangina”, izay tsy mifarana ny milamindamina ihany no vokatry ny fisainany, ary miaraka amin'ny biolojika zavamananaina (about) mandra-zatovo, na ara-batana bleaching uselessness. Impact ny saina dia tsy hoe fotsiny tossing hevitra momba ny manao isan-karazany ny herisetra sy ny ratra ara-batana mahatonga ny mpandalo tonga tànany na ny olon-kafa. Izany dia noho ny zava-misy, fa “demonia fandaharana” mirenireny ao amin'ny fepetra toerana tsy misy sakana sy mamorona ny feo isan-karazany ho an'ny fiainana ara-pahasalamana.
Impact demonia fandaharana mitarika ny fiaraha-monina indrindra ny sehatra stereotype: “Aza ho hamadika ny – fa mahamenatra!” Na dia tsy teny avy amin'ny fanjakana lalàna, meloka dia heverina ara-dalàna ny fihetsika ao amin'ny governemanta faribolana. fametrahana: “Raha toa ianao ka tsy mba mamadika ny dia ianao sy ny wimp koa ianao tany am-boalohany mba hieritreritra momba ny fahefana.” – no fototry ny hamorona ny mpitarika fikambanana. Marina indrindra izany ho an'ny faritra eo ambany fiahian'ny ao amin'ny atonton-kintan'i Venatici, ary koa ny tsara biolojika zavamananaina.
endriny rehetra, ny faniriana firaisana asa sy ny faniriana ny hitondra ny isa ho amin'ny Infinity, Izany dia fototra ara-tantara. Toa, ny ambony ambony dia nanana fahafahana tsy manam-paharoa ho an'ny fitondran-tena maloto, ary be dia be ny fotoana lounged, mated famantarany zavatra tsapaka. Noho izany, ny ankizy teraka Lalaom-pirahalahiana. Raha tafiditra ao ny haavon'ny herisetra nohaniny mandeha bibidia manan-kaja ambony – tsy misy isalasalana fa ny fikatsahana ny zezika ny vavy avadika misy. Noho izany misy lehibe habetsahan'ny afa-po mandrakizay “biolojika ahi-dratsy” amin'ny “bludskim Gene”. Iza amin'ny asa rehetra fanasokajiana du Gouvernement no tsara indrindra mety amin'ny toerana mpitarika. A, Mety ho, diso rehetra?
Biby kely toy ny voalavo, totozy sy ny hamsters mikotrika haingana indrindra, satria tsy manana antoka eo amin'ny fiainana, ary ireo foana teo amoron'i ny tafavoaka velona. Ny famelana azy ireo hanokana ny fiainany mangalatra ny tompony lisitra. Raha mandinika ny somary kelikely kokoa ny fiainana amin'ny teny (toy ny olombelona) dia afaka manatsoaka hevitra, tahaka koa izy ireo sy ny totozy no katsentsitra an-tenan'ny ny planeta: hangalatra ny loharanon-karena voajanahary sy ny biolojika, ary na dia hita fa samy hafa, fa izy ireo ihany izy ireo. Toy ny fampihenana ny tahiry voajanahary, hampihenana ny isan'ny ala, isan'ny biby sy ny biby fiompy, etc.. manao firaisana haingana “podplintusnyh totozy” mitombo ny, ny sakafo sy ny sakafo lasa mampisafotofoto kokoa. Aza maika ny mikotrika ho podsazhennym GMO, fa na dia ny fianakaviambe manontolo terminates sampana ao amin'ny taranaka fahatelo, ary miaraka amin'ny raibeko ho faty daholo ny andalana levitra. Raha satria tsy tao amin'ny tena ianao dia ho afaka ny mieritreritra ny haben'ny ny idiocy. Rehefa zara raha velona “voalavo” hampitombo haingana ka handevona ny zava-drehetra, mahatsiravina.
izy ireo efa, izay nanapa-kevitra ny ho fahafaham-baraka masculinity – hivadika ho henpecked. Ny tena ludicrous mba hijery ny lehilahy lehibe, izay manamarina misy “Vaciamadrid” haitraitra fotsiny, ary “lavo eo ambanin'ny ny ombelahin-tongony” Board ny, ny “hita pataloha”. Ary manao izany amin'ny tena lehibe sy tezitra face. Mandritra izany fotoana izany ihany koa izy ireo milaza ho mpitarika eo amin'ny fiainana-rafitra fanohanana. Toa, dia Avy amin'ny deranged miandalana cretinism. Raha nisy ratsy ireo, fara fahakeliny, ny sasany amin'ny fisainana rationality ' – ny zava-misy eo amin'ny planeta lany tamingana hanana fanantenana ny sasany, fara fahakeliny,.
Maro ny lehilahy lehibe ho rovitra fahefana, efektivnost manakana mikoriana ilaina amin'ny rafitr'ity tontolo ity governemanta fivelomana. Nahazo tsara rehetra dia lany amin'ny fomba fombafomba ao amin'ny fanompoam-pivavahana fivavahana iraisam-pirenena podkabluchnogo. Ho an'ireo liana, dia tsy ho sarotra ny hamaritana ny fiara henpecked hery politika. Kely iray hetsika – I Mir “henpecked”.
Fiantraikany System Zombie bioform, efimerichnuyu tanora velona na nirenireny tany an-vokatry ny rehefa manao fahadisoana, efa-polo taona manomboka ny mieritreritra. fahamarinana, ny ankamaroan'izy ireo mieritreritra afa-tsy mba hahita ny fanamarinana noho ny fitondran-tena, ary ny sasany dia miezaka ny manafina fotsiny ny heloka bevava. Inona anefa no ho entiny miaraka aminy ao amin'ny efa-polo taona? Raha andevo asa, satria, tena inoana, fa izy ireo dia afaka ny ho mety ho an'ny tanjona hafa.
raha “conveyor ny fahafatesana” ary “boribory vetaveta rehetra izao” nitarika Satana ho dimam-polo taona no tsy afaka handevina – ny, tokoa, toy ny rehetra, ianao mividy-damaody dryndulet, ny mitaingina eo amboniny “andry fototry davalok”, ary ny rafitra ho grassirovat, izay tonga sy ny fotoana. mahagaga, saingy maro mampanantena lehilahy dimam-polo taona no mandany ny fiainany mba hahazoana antoka aina fepetra ny nijanonany, hampivelarana, hahatakatra, Fantatr'i, mianatra ny sasany fahenina-ambaratonga singa, ary avy eo tahaka ny mitondra amin'ny “mitsoraka any an-ambany-hatetika fotaka” fahafinaretana sy fifaliana, angamba, avy amin'ny maranitra fiovana eo amin'ny toerana misy ny atidoha manakimpy, ka dia mitsahatra ny hahalala ny zava-misy. Otrik'aretina fampiharana ara-tsosialy fandaharana, fiainana “ondry very sy ny ondrilahy” miezaka hamita ny.
Ny olana dia misy mandra-, mandra-tsy Dec azy teo amin'ny sorony.
“Leads nofo rehetra ho zava-poana.” Shakyamuni Buddha nanao hoe:. midika, fa hitarika ho amin'ny fihetseham-po rava.
March 2013 ny taona ao amin'ny kalandrie gregorianina
ღ ☼ ₪ Oliver Shanti – Nikapoka Heart ღ ☼ ₪